Iindaba-Ukhuphiswano lweZakhono zoQeqesho lweYucera
Ukhuphiswano lokuqala lwezakhono lomsebenzi waseYucera lwezinto zebhloko zirconia zaqala ngoJulayi 12 th, eyayixhaswa yiOfisi Yomphathi Jikelele. Umnyhadala wonke wohlulwe waba ziinxalenye ezintathu: ukubhaliswa kunye nokuphononongwa, ukhuphiswano kwindawo yesiza, kunye nefoto yeqela elinikezela amabhaso. Ngaphezulu kwama-30 abagqatswa abazibandakanye nomsebenzi oqatha weebhloko zirconia cad cam kwi-press eyomileyo, ukucofa i-isostatic ebandayo, ukwenziwa kwemilo, ukushicilela kunye nokupakisha, njl.
Ukufumana iziphumo ezilungileyo kolu khuphiswano, abasebenzi kwisebe lezemveliso basebenzise ixesha labo elaneleyo lokufunda nokuzilolonga, bekhangela kwiingcebiso kunye neendlela zokuphucula ukusebenza ngokukuko, becebisa ngezikimu zokusebenzisa, ukuphucula iindlela zomsebenzi, kwaye bonke bakhuphisana ukukhuphisana. kolu khuphiswano kwinkqubo yokuveliswa kwecryc zirconia block. Abasebenzi baseYucera babonisa isimbo sabo kwaye babonisa ixabiso kolu khuphiswano. Emva kokhuphiswano lomsebenzi, bekukho iqela leengcali zobuchwephesha ezinezakhono eziqinileyo, iindlela ezikhawulezayo, umgangatho ozinzileyo nothembekileyo uvelile, kubandakanya uLuo Feifei, uFan Mingchun, kunye noLiu Feihu kwinkqubo yokucofa eyomileyo, uZhao Xiaoduo ovela kwinkqubo yokubandezela ebandayo ye-isostatic, kunye noJiang Kele ovela kwinkqubo yokulungisa imilo, u-Li Wanxing, u-Li Jing, u-Zhong Yulian, ovela kushicilelo kunye nokupakishwa. Eli qela loogxa ababalaseleyo lahlala kulindelo, lasebenza nzima kwaye labetha isihlwele ngexesha lokhuphiswano lwe-zirconia yamazinyo, kwaye laphumelela ubuntshatsheli kukhuphiswano lwenkqubo nganye, kwaye laphucula ukusebenza ngokukuko kwexesha lokusebenza kwesithuba ngasinye ukuya kuthi ga kwi-10%, ebeke umzekelo wokuphuculwa kwezakhono zomqeshwa zirconia oxide block kwixa elizayo, ikwabonelela ngesalathiso sokwandiswa kwemigangatho yokuvelisa ibhloko ye-zirconia milling.
Bonke abakhuphiswano bahlanganisene ekungeneni okungundoqo kwenkampani ukuba bathathe inxaxheba kumsitho wokuwongwa nge-8: 00 kusasa nge-Epreli 19th. Kuqala, uMnu Liu, uCEO waseYucera, uphawule kukhuphiswano lwezakhono zirconia yamazinyo kwaye wabhengeza iziphumo kunye nenqanaba lokhuphiswano, emva koko iinkokheli zesebe lemveliso zanikezela ibhaso. Abasebenzi bazise amabhaso kwaye bathatha ifoto yeqela. Bayi-7 bebonke abagqatswa abaphumeleleyo isihloko “soMdlali weMbasa yeGolide” kolu khuphiswano lomsebenzi lwe-zirconia milling block, kwaye bafumana ibhaso le-1,000 yuan kunye neembasa zesatifikethi. Injongo yalo msitho ibikukuhlaba ikhwelo kubo bonke abasebenzi ukuba bathathe olu khuphiswano lwezakhono zomsebenzi njengethuba lokuqalisa ngokukhawuleza xa kuthelekiswa, ukufunda, ukufumana, ukunceda, kunye nokugqwesa ngaphakathi kwisebe, kwaye bezama ukuphucula izakhono ezigqwesileyo, ngokuzimisela funda izakhono zomsebenzi, kwaye uphucule ngokukhawuleza ukusebenza kakuhle kwemveliso yebhlog ye-zirconia multilayer, ukuqinisekisa umgangatho webhloko ye-zirconia kunye nokuzalisekiswa kweenjongo ezahlukeneyo kube negalelo elihle kuphuhliso olukhawulezayo lweYucera.